6 amaphutha owenzayo, futhi akufanele uwenze, ngedivayisi yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
6 amaphutha owenzayo, futhi okungafanele uwenze, ngedivayisi yakho ye-Android
Abasebenzisi abaningi bayayijabulela idivaysi ephathekayo noma ithebhulethi enohlelo lokusebenza lwe-Android futhi yize iningi labo lazi ukuthi liziphatha kanjani ngokukhululeka okukhulu, abaningi benza amaphutha athile okungafanele enziwe. Akekho osichazelayo ukuthi isetshenziswa kanjani i-smartphone noma ithebhulethi futhi sihlala sifunda ngokuya ngalokho esikufunda kwinethiwekhi yamanethiwekhi noma lokho umngane noma isihlobo esisitshela khona.
Namuhla ngeke sikukhombise noma yimuphi umsebenzi omusha we-Android, kepha sizogxila ekuvuleni amehlo akho futhi sikwenze ubone 6 amaphutha owenzayo nowenzayo futhi akufanele siwenze ngedivayisi yethu ye-Android. Futhi khumbula ukuthi noma ungahle ungakukholwa, cishe wonke amaphutha esizowabuyekeza enziwe, amanye awo enganakile.
Uma ungafuni ukwenza amaphutha ngedivayisi yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Android, bheka ukuthi sizokutshela ini, futhi ngokuqinisekile ukusebenza nokusebenza kwesiginali sakho kuzoba ngcono kakhulu. Njengesincomo sikutshela ukuthi kufanele ugcine le ndatshana phakathi kwezintandokazi zakho noma uthathe inothi eyinqaba, ukuze uthole ulwazi esizokukhombisa lona lapha njengamanje.
1 Landa izinhlelo zokusebenza ezivela kumthombo ongaziwa
2 Ukhohlwa ukufaka izibuyekezo zesoftware
3 Sebenzisa i-antivirus eyodwa noma ngaphezulu
4 Vala izinhlelo zokusebenza noma usebenzise Ababulali Bomsebenzi
5 Usebenzisa ama-App cleaners, elinye iphutha le-rookie
6 Ungaqali kabusha idivayisi yethu
7 Umbono ngokukhululeka
Landa izinhlelo zokusebenza ezivela kumthombo ongaziwa
Android Kuza ngokwendabuko okulungiselelwe ukungavumeli noma yimuphi umsebenzisi ukuthi afake uhlelo olungalandwa ku-Google Play noma okufanayo, isitolo sohlelo lokusebenza. Uma iGoogle yenze lesi sinqumo, ungacabanga ukuthi ngesokuthize. Kodwa-ke, noma yimuphi umsebenzisi angashintsha ngendlela elula le nketho, futhi afake noma yiluphi uhlelo lokusebenza kusuka, ngokwesibonelo, elinye lamakhasi ewebhu ayikhulu agcwele izinhlelo zokusebenza kwazo zonke izinhlobo, alungele ukulanda kudivayisi yethu.
Ngaphandle kwakho konke lokhu, abasebenzisi abaningi bafaka izinhlelo zokusebenza ezingaziwa kumakhalekhukhwini noma kuthebhulethi yabo nsuku zonke, bezibeka engcupheni yazo zonke izinhlobo. Ngokusobala leli yiphutha, futhi liyisisekelo, lapho kungekho muntu okufanele awe khona.
Indlela ekahle yokungangeni kuleli phutha kungaba ukufaka izinhlelo zokusebenza ezikwi-Google Play kuphela, ngeshwa nakho okungasiqinisekisi. Noma kunjalo, kunezinhlelo zokusebenza, eziwusizo olukhulu, ezingatholakali ukuze zilandwe esitolo esisemthethweni sohlelo lokusebenza le-giant search. Uma ungenakho okunye ongakwenza ngaphandle kokufaka izinhlelo zokusebenza ezitholakala ngaphandle kwe-Google Play, kwenze ngokucophelela okukhulu futhi wazi ukuthi uzibeka engcupheni enkulu.
Ukhohlwa ukufaka izibuyekezo zesoftware
I-Google ivame ukwethula njalo kaningi Ukuvuselelwa kwe-Android OS, ezimeni eziningi ezixazulula ezinye izinkinga noma zilungise amaphutha angavela kwisoftware ethandwayo. Ukungayifaki kusho ukuthi la maphutha nezinkinga azikho kudivayisi noma kuthebhulethi yethu.
Ukuvuselelwa kukhonjiswa njengesaziso uma kutholakala nephutha lokuthi Akumele sizibophezele ukuhlehlisa unomphela lezi zibuyekezo. Isincomo sethu ukuthi akukho lutho ngaphandle kwedivayisi yethu elisixwayisa ukuthi inguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwe-Android noma isiphi isibuyekezo iyatholakala, ifakiwe futhi ungazishiyi kwesinye isikhathi.
Ngezibuyekezo ezenziwa ngabakhiqizi abahlukahlukene, kwenzeka okufanayo futhi kuyadingeka ukuthi uzifake ngokushesha lapho sezitholakala ngoba nakanjani zizokwenza i-smartphone noma ithebhulethi yethu isebenze kangcono kakhulu. Ukungazifaki, njengoba kwenzeka ngezibuyekezo ze-Android, kwenza iphutha elibalulekile futhi lokho kungasho ukuthi idivayisi yethu ibhajwe emaphutheni angakhungathekisa, ngokwesibonelo, ukusebenza kwedivayisi yethu.
Sebenzisa i-antivirus eyodwa noma ngaphezulu
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule Sesivele sikutshela kule ndatshana ukuthi akudingekile ukufaka, noma kunjalo, i-antivirus kudivayisi yethu ene-Android operating system ngoba ziyizinhlelo ezidla inani elikhulu lezinsizakusebenza nebhethri, futhi umnikelo wazo ngokuqeda amagciwane uyindlala kakhulu.
Futhi yilokho Amagciwane aku-Android abalwa eminweni yesandla esisodwa, ngoba iningi labo linyonyobela kwi-smartphone noma ithebhulethi yethu ngokusebenzisa izinhlelo ezinomsuka ongaziwa. Njengoba leli kuyiphutha esingasenzi noma okungafanele lisenze njengoba sibonile phambilini, akudingekile ukufaka i-antivirus kudivayisi yethu.
Uma usadinga ukuqiniseka ngokwengeziwe ukuthi akufanele ufake i-antivirus ku-terminal yakho, hlola ukusetshenziswa kwebhethri kwalezi zinhlobo zezinhlelo zokusebenza futhi uhlole nezinsiza abazisebenzisayo. Lolu hlobo lwesicelo luhlala lusebenza, njalo, ngemuva nokusetshenziswa kwemali okulandelayo, ngenxa yalesi sizathu Akudingeki nokuthi sifake ama-optimizer we-battery noma we-RAM.
Vala izinhlelo zokusebenza noma usebenzise Ababulali Bomsebenzi
Ukuthi ngabe lokhu kuyiphutha yini noma kuyinto ezuzisayo kudivayisi yethu yeselula noma ithebhulethi, singaba nenkulumompikiswano ezoqhubeka amahora amaningi. Futhi ngukuthi yize abaningi becabanga ukuthi ukuvala noma yiluphi uhlelo esilusebenzisayo kuyinto enhle, noma lokhu kuvalwa ngesandla noma ngokuzenzakalela ngalabo okuthiwa ababulali bomsebenzi, lokhu akulungile ngokuphelele, okungenani ngombono wethu nokuthi sizotshela ungezansi nje.
Uhlelo olusebenzayo ngaso sonke isikhathi lapho sivula uhlelo, silubeka kwimemori ye-RAM yedivayisi, ukuze kuthi lapho silivula okwesibili, livule ngejubane elingaphezulu. Ukuyivala ngesandla noma ngokuzenzakalela kwenza lokhu kungenzeki ukukwenza, ngakho-ke uhlelo lokusebenza luzothatha isikhathi esijwayelekile olusithathayo ukuvula sengathi besilivula okokuqala. Isibonelo, uma singabasebenzisi abajwayelekile be-WhatsApp, i-Android izogcina uhlelo ku-RAM ukuze isikhathi ngasinye lapho siyivula, ivule ngesivinini esiphezulu. Uma siyivala, nganoma iyiphi indlela, kuzothatha isikhathi eside ukuyivula, into cishe engathandwa muntu ngokungangabazeki.
Ukuvala izinhlelo zokusebenza kuyiphutha, uma ngokwesibonelo lelo hlelo lokusebenza lisetshenziswa ngemvamisa enkulu. Esimweni lapho ukusetshenziswa kwalolu hlelo kukodwa noma ngezikhathi ezithile, ukuluvala, ngesandla noma nge-Task Killer, kungaba yimpumelelo ngoba akunangqondo ukugcina izinhlelo zokusebenza "ziphila" ngaphandle kokuthi sizisebenzise ku isikhala esifushane.
Usebenzisa ama-App cleaners, elinye iphutha le-rookie
La inkumbulo yenqolobane ivumela izinqubo ezisebenza ngemuva ukuthi ziqale ngokushesha okukhulu, ngenkathi ivumela izinhlelo zokusebenza ukuthi zisebenze ngesikhathi esincane kakhulu. Ukusula le nkumbulo, ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezaziwa ngokuthi i-app cleaners, kuyiphutha le-rookie, futhi ukuphela kwento eyenzayo ukwehlisa ijubane, ngokwesibonelo, ukuvulwa kwezinhlelo zokusebenza esizisebenzisa kakhulu.
Akulona iphutha ukuhlanza inqolobane ngezikhathi ezithile, ngoba ingagcina izinto ezingasizi ngalutho, kepha ukusuka lapho ukuyihlanza njalo ngesigamu sehora sibonga abahlanza uhlelo lokusebenza, kunomehluko omkhulu.
Uma inkinga yakho ukungabi bikho kwendawo kudivayisi yakho yeselula noma kuthebulethi, susa izithombe eziphindaphindwayo noma ezingenamsebenzi, ngoba ngokuqinisekile uzokhulula isikhala esiningi ngalokhu futhi ngaleyo ndlela uzovumela i-cache isebenze njengakuqala, okuzoba usizo kakhulu okwakho nedivayisi yakho.
Ungaqali kabusha idivayisi yethu
Ukuvala lolu hlu ngeke sikhohlwe ngomunye iphutha elivame kakhulu, okungelinye ngaphandle kokungaqali kabusha idivayisi yethu. Esikhathini esingengakanani esidlule cishe bonke abasebenzisi babecisha idivayisi yethu yeselula njalo ebusuku, ngokwesibonelo, kepha isikhathi esithile manje, lo mkhuba onconyiwe, siyekile ukwenza ngezizathu ezahlukahlukene nesehlukile.
Kodwa-ke, ukuqala kabusha idivayisi yethu ngohlelo lwe-Android kunganconywa kakhulu ngoba lokhu kusula inqolobane, kususe wonke amafayela wesikhashana agcinwe kuwo. Ngaphezu kwalokho, ukuqala kabusha kungaxazulula amaphutha amancane lapho kucubungulwa imiyalo nokunye ukuphazamiseka okuncane.
Uma ungakaqali phansi idivayisi yakho isikhathi eside, kwenze khona manje futhi uzobona ukuthi uzobona kanjani ngokuthuthuka okuthile ezicini ezithile.
Amadivayisi anohlelo lokusebenza lwe-Android anikeza abasebenzisi ukusebenza okuhle futhi kunzima kakhulu ukugoqa phansi noma ukucekela phansi, kepha ngaphandle kokungabaza kuyadingeka ukuthi ungenzi amaphutha amaningi kakhulu njengalawa esiwabukezile namuhla futhi ngaphezu kwakho konke ukungaziphindi ngesikhathi.
Uma wenza noma yimaphi amaphutha esiwabukezile kulesi sihloko nsuku zonke, alungise manje bese uzama ukuwagwema ngokuzayo, ukuze idivayisi yakho isebenze kahle futhi ikwazi ukuhlala eminye iminyaka embalwa.
Ingabe uyawenza amaphutha esiwabukezile kule ndatshana?. Sitshele ukuthi yimaphi esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo nokuthi ukwazile kanjani ukuyeka ukwenza lawo maphutha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » 6 amaphutha owenzayo, futhi okungafanele uwenze, ngedivayisi yakho ye-Android
Elinye iphutha elijwayelekile ukuba nezinsizakalo ezingadingekile ezisebenzayo, njenge-GPS, esebenzisa ibhethri eliningi. Iseluleko sami ukuthi singasebenzi zonke izinsizakalo esingazidingi.
Ngiwafundile amaphutha enziwa umuntu muhle kakhulu. Angifanele ukulanda i-App ehlukile
Ingabe kuhle ukuyikhokha njalo ebusuku?
Iseluleko sihle ngiyakuhalalisela.
UNuria Maria Vargas kusho
Izincomo ezinhle kakhulu zokugwema amaphutha. Ngiyavuma ukuthi kukhona engikwenzile ngenxa yokungazi ngale ndaba. Ngizozama ukulandela izeluleko eziphakanyisiwe. Ngiyabonga.
Phendula uNuria María Vargas
U-Omar solano kusho
Ngicabange ukuthi kulungile futhi kulula ukusebenzisa i-antivirus ku-android. Kunemininingwane eminingi kakhulu ngokulula kokuyifaka kangangokuba kuyethusa ukungafakwa kwayo.
Phendula u-Omar Solano
Ngithande udaba lwakho lokugcina, ngithanda ukwazi ukuthi ungancoma yini uhlelo lokusebenza ukuze ukwazi ukulanda amavidiyo omculo angenawo amagciwane ngaphambili ngiyabonga kakhulu imikhonzo
I-Asus Zenfone 3, iZenfone 3 Deluxe neZenfone 3 Ultra manje sezisemthethweni